ISA STYLE ENTSHA
Indoda ebukhali kufuneka ihonjiswe ngemfashini yengubo yakudala. I-ISA ephezulu yetanki, yaphule umbono wakho. Ilaphu elithambileyo le-100% yeqokobhe lomqhaphu liyakwanga ulusu lwakho kwaye luyenze intshukumo yakho ngokulula, awuyi kuziva ungonwabanga kwaye ulwandle xa ulinxibile. Wenze umthambo onzima.
Ukudala imodeli yezemfundo "yesikolo, ishishini kunye noColonel".
U-Isabella, umseki ka-Isa, ngutitshala osisigxina kunye nemvelaphi yemfundo kwiJiangxi Vocational College yezoKhenketho kunye noRhwebo. Useke iklasi yokusebenzisana kwamashishini esikolweni, ukuphonononga umxholo wemfundo ephezulu yezemfundo kunye ...
I-ISA ichithe iminyaka emi-2 isenza ngaphezulu kwezitayile ezingama-300 ozikhethile. Unokongeza uyilo lwakho kwezi zitayile kwaye utshatise izixhobo ozifunayo ukuze ubonakale wahlukile.
I-ISA ichithe iminyaka emi-2 isenza ngaphezulu kwezitayile ezingama-300 ozikhethile. Unokongeza uyilo lwakho kwezi zitayile kwaye utshatise izixhobo ozifunayo ukuze ubonakale wahlukile. 20 + uyilo olutsha usuku ngalunye.
Nokuba ilaphu okanye isitayile, sihlala siphucula kwaye siphucula ukuhlangabezana neemfuno zabantu abaninzi.
Ngokubhekisele kwizimbo zokunxiba, sinolwazelelelo lonke ixesha lonyaka, kwaye siya kuphuhlisa kwaye siyile izitayile ezintsha ngokwendlela yentengiso kunye neendlela zentengiso ukuhlangabezana neemfuno zentengiso kunye ne-aesthetics yoluntu ngaxeshanye, inkampani yethu ibisenza izitayile ezintsha, kutsha nje, yethu c ...